म्यानपावरले पासपोर्ट ‘होल्ड’ गरे कहाँ उजुरी गर्ने होला ?
Fri, Feb 21, 2020 | 17:25:15 NST
नाम ठेगाना नलेखी पठाएको एसएमएसमा
प्रश्न : मेरो पासपोर्ट म्यानपावरमा छ । भिसा आएको छैन् । म्यानपावरमा सोध्दा आइहाल्छ भन्छ र पासपोर्ट माग्दा दिँदैन । त्यसका लागि कहाँ उजुरी गर्ने होला ?
उत्तर : बेनामे साथी, कानुन अनुसार तपाईंको पासपोर्ट कुनै संस्था वा व्यक्तिले तीन महिना भन्दा धेरै समय राख्न पाउँदैन वा ‘होल्ड’ गरेर राख्न पाउँदैन् । म्यानपावर कम्पनीले तीन महिना भन्दा धेरै समय देखि तपाईंको पासपोर्ट राखेको हो भने त्यो गैरकानूनी काम हो । त्यसका लागि तपाईंले वैदेशिक रोजगार विभागमा गएर उजुरी दिन सक्नुहुन्छ । विभागको कार्यालय काठमाडौंको बुद्धनगरमा छ ।
वैदेशिक रोजगारका बिभिन्न पक्षमा तपार्इंलाई चाहिएका जानकारी अरुले सोधेका प्रश्न र त्यसको जवाफमा पनि पार्इन्छ । तर, तपार्इंका आफ्नै कुनै प्रश्न छन् भने पनि हामी तपार्इंको प्रश्नको जवाफ ल्याउन कोसिस गर्छौ । वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित प्रश्न र निकायका जिम्मेवार व्यक्तिले दिएको जवाफ यहाँ राखिन्छ । तपार्इं पनि वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित कुनै प्रश्न सोध्न चाहनुहुन्छ भने desh@unn.com.np मा इमेल गरि पठाउनु होला । अथवा मोवाइलको मेसेज बक्समा गएर dp टाइप गरि एक स्पेस दिएर आफ्नो विचार लेखि 5566 मा पठाउन पनि सकिन्छ । हामीलाई फेसबुकमा लगइन गरेर पनि सुझाव प्रतिक्रिया दिन सकिन्छ । इमेल, एसएमएस र फेसबुकमा आएका तपार्इंका प्रश्नको जवाफ हामी दिदै जानेछौं ।